Banijya News | » पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण कुन क्षेत्रमा कती लगानी ? पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण कुन क्षेत्रमा कती लगानी ? – Banijya News
अर्थनीति मुख्य समाचार
पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीको आकर्षण कुन क्षेत्रमा कती लगानी ?
१८ कात्र्तिक २०७६, काठमाडौं ।
विदेशी लगानीमा देखिएको उत्साहले नेपालमा लगानी गर्नेको वातावरण राम्रो बनेको संकेत गरेको छ । सरकारले गरेको नीतिगत सुधार र लगानी सम्मेलनको प्रभाव अब यतिखेर देखिन थालेको छ । अझ सरकारले पर्यटन बर्ष मनाईरहँदा विदेश बाट आउने लगानी पनि पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको छ । असोज मसान्तसम्म १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी आएकोमा सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा आएको हो ।
लगानीमध्ये ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । पर्यटन मध्ये पनि होटल क्षेत्रमा अधिकांश लगानी केन्दीत भएहो हो । यतिखेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानी कर्ताको होड नै चलेको देखिएको छ । पर्यटन पछि सेवा क्षेत्रमा लगानी आएको छ । यो क्षेत्रमा दुई अर्ब ७३ करोड लगानी आएको हो । यसपछि सूचना प्रविधिमा एक अर्ब ३० करोड, उत्पादनमूलक उद्योगमा ९० करोड, कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा ५ करोड रुपैयाँको लगानी भित्रिएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । समीक्षा अवधिको लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै ७ अर्बले बढी हो । ७७ परियोजनाका लागि १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको हो । यो गत वर्षको कुल लगानी प्रतिबद्धताभन्दा आधा लगानी तीन महिनामै भित्रिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल २३ अर्ब ६९ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।